दाँत दुख्न र गिजा सुन्निन थालेपछि मात्र अस्पताल ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, ६ चैत, आज २० मार्च अर्थात विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस । से आह एक्ट अन माउथ हेल्थ भन्ने नारासहित दिवस मनाइदैछ । तर नेपालमा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना बढ्न सकेकाे छैन । दाँत दुख्न थालेपछि तथा गिजा सुन्निएपछि मात्र अस्पताल जाने परिपाटी छ ।
सुन्दा सामान्य लागेपनि मुख स्वास्थ्यमा ध्यान नदिदा गम्भीर समस्या वा भनाै राेगकाे शिकार भइन्छ । ६९ प्रतिशत किशाेर किशाेरी र ५८ प्रतिशत बालबालिकामा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेकाे नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिष्ट एशाेसिएसनकाे तथ्यांक छ । यसमा पनि दाँतमा किरा लाग्ने, गिजा सुन्निने र रगत आउने समस्या अधिकांशमा देखिएकाे छ र वर्षेनी बढ्दै गएकाे दन्तराेग विशेषज्ञ डा. मरिसा दाहालले बताइन् ।
एक सय मध्ये ९० जनामा देखिएकाे डेन्टल हाइजिनिष्ट माइकल देवकाेटाले बताए । सामान्यतया दाँत, गिजा, जिब्राे, मुखभित्र रहेका तन्तु तथा हड्डीकाे स्वास्थ्यलाई नै मुख स्वास्थ्य भन्छाै । तर यसलाई अधिकांशले नजरअन्दान गर्ने गरेकाे डा. दाहालले बताइन् । यसले मुटुराेग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मुखकाे क्यान्सरकाे जाेखिम समेत बढेर जाने कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले बताए । साे कलेजमा यस्ता समस्या लिएर दैनिक २ सय बढी बिरामीहरु अस्पताल पुग्ने गरेकाे उनले जानकारी दिए ।
अधिकांश व्यक्ति समस्या भएपछि मात्र उपचारका लागि अस्पताल जान्छन् । तर समयमै दाँत तथा मुखको परीक्षण गराए आफ्नाे मुखलाई स्वस्थ राख्न सकिने डा. दाहालले बताइन् । बिहानकाे खान खाइसकेपछि र राति सुत्नुअघि दाँत माज्नुपर्छ । साथै धेरै कडा भन्दा पनि नरम ब्रसले ४५ डिग्रीकाे एन्गलमा ब्रस राखेर दाँत माज्नुपर्ने उनकाे सुझाव छ । वर्षकाे २ पटक मात्र पनि डेन्टलमा दाँत, गिजाकाे परीक्षण गरे यी विभिन्न समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
Tagged डेन्टल दाँत स्वास्थ्य
इन्टेरियर डिजाइनिङमा भविष्य खोज्दै साहाना
अब काठमाडौँ शहरको धुलो ब्रुमरले सफा गरिने
Tags: डेन्टल, दाँत, स्वास्थ्य